सरकार विरुद्ध सडकमा जन-आक्रोश, प्रहरीको प्रदर्सनकारी माथिको आक्रोश ! (फोटोफिचर) - muktikhabar
सरकार विरुद्ध सडकमा जन-आक्रोश, प्रहरीको प्रदर्सनकारी माथिको आक्रोश ! (फोटोफिचर)
मुक्तिखबर	काठमाण्डाैं	जेठ २९, २०७७
काठमाडौ ।कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रणमा सरकारले चालेको कदमप्रति नागरिकस्तरमा असन्तुष्टि बढ्दो छ । महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले केवल लकडाउन गरेको, परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेको, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको, राहत वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको आदि विषयलाई लिएर राजधानीमा सर्वसाधारण विरोधमा उत्रिएका छन् ।
सर्वसाधारण शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिदा सरकार भने त्यसलाई दमन गर्न बल प्रयोगमा उत्रिएको छ । बिहीबार पनि गरिएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ । प्रदर्शनकारीमाथि पानीको फोहरा र अश्रुग्यास प्रहार भएको छ ।
२९ जेठ २०७७, बिहीवार १४:११ बजे प्रकाशित
कुवेतबाट आममाफी पाएका नेपाली लिएर जहाज काठमाण्डौ अवतरण
लकडाउन पुर्णरुपमा खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन सर्वोच्चको आदेश!